waali sano 3 4 bilood ka hor #203
Ma jiraa qof kale inuu soo booqdo catz / saitek madadaal ah si uu dib ugu soo dejiyo darawallada iyo fiilooyinka? Waxaan helaa xitaa haddii ay tahay arrin "haa 'wax walba', wax walbaa shaqeynaya ka dib booqasho halkaas. Waxaan u maleynayaa inaan helayo SPAD laakiin waan maqalayaa in ay tahay qadiyad yar.
waali sano 3 4 bilood ka hor #204
Marnaba ma aanan haysan, si daacad ah.
Waxaan u isticmaalay inaan Saitek x45 laakinse ugu dambeyntii wuu iga baqay aniga>.> WAS ayaa ku dhawaaqday x55 on ebay laakiin waxay si weyn uga baxday
waali sano 3 4 bilood ka hor #209
Sidee ayaa x45 u jabtay? Walaac maaha, dheradaydii way soo baxday. Waxay ahayd dukumiintigii ugu fiicnaa ee helicopter ah ka dib markii aan ka soo baxo ilaha. Waxaan maqlay in ay suurtagal tahay in ay soo celiso iyaga oo leh buufin sixir ah, waan soo iibsaday laakiinse aan weli isku dayin. Intii aan sugayay maraakiibta caalamiga ah, waxaan bilaabay ebay gawaarida. Waxaad heshay CH-da ugu fiican ee aad ka heli karto (tartan usbuucan) sida $ 40USD, iyo hablaha laydhka ah ee loogu talagalay $ 60USD. Dhamaan waxaan ubaahanahay waa gundhiga oo waan faraxsanahay.
Anigu nasiib uma lahayn x55 iyo x56 on ebay. Labada dhinacba waa la qiimeeyaa, ama liistada sheyga (oo kaliya ulaha oo aan dhuubanayn oo leh wareegga ama wareegga) ama aan la baadhin (kuwa aan lahayn dekedda usbta iyo tirooyinka 30?)
Dad badan ayaa jecel inay necbaan, laakiin mid ka mid ah heshiisyada ugu fiican ee aan arkay waxay tahay HOTAS X ($ 20USD), laakiin raadi midabka buluugga ah ee HOTAS 4 ($ 30USD). Anigu waxaan sameeynayaa labo naadi oo dhaqso ah (labajibbaar labo god oo loogu talagalay xakamaynta maskaxda, oo gooya flanjiga hareeraha hagaajinta gu'ga si aad uga dhigto gu'ga ka dib qalabixinta helikobtarada) oo u dhiib saaxiibadayda doonaya inay bartaan helikobtarro. wuxuu sameeyaa kombiyuutarka casriga ah ee cajiibka ah marka aad si sahlan u qaadi karto wax walbaa.
waali sano 3 4 bilood ka hor #215
Hi KC, marnaba ma haysan X-45, waxaan u maleynayaa in farriimaha ay sameeyeen iskutallaab. Dhamaan waligay lahaan jiray waa nidaamka xakamaynta Saiten ee X-55 HOTAS. Waa inay ahaadaan "mid isqabsi leh". Haddii aan rabo kaliya saan iyo badhado waxaan ku laaban lahaa Logitech Supreme, taas oo ah dhammaan waxaad u baahan tahay haddii aad tijaabiso diyaarad. Haddii aad (sida aan ahay) wax dagaal ah oo ka dhan ah qaar ka mid ah AI, ka dibna X-55 (ama 65) "nidaamka xakamaynta" waa tigidhka kulul ee HOTAS.
waali sano 3 4 bilood ka hor #217
marka ugu horeysa, ka saarto lol-galka kambiyuutarka ee kakooban, waxaan hubaa inuusan ahayn mid ula kac ah oo aan lakab lahayn hareeraha beerta
Anigu ma garanayo waxa ay dhammaantood la socdeen dhagaxa, laakiin waxaan ogaaday in qaybta gawaarida ay garaacday markii aan lumiyay miisaankayga iyo gacanteyga u soo degtay dhinaca gacanta, oo aan iska tuuray.
Naqshadeynta naqshadeynta gawaarida, haddii aad waydiiso aniga ... Waxaan ku guuleystey in aan sameeyo dayactir aan toos ahayn adigoo isticmaalaya cajalado daaweyn ah laakiin waad ogtahay in aysan weligeed sii socon.
Adiga oo aan lahayn ulo, gawaarida waa wax aan faa'iido lahayn. Mid ka mid ah waxaan isticmaalayaa ul, waxaan soo socdaa waxaan isku dayayaa in aan isku dayo inuu xakameeyo (BARNAAMIJYADU WAXAA KA HELAA MOST oo ku saabsan gurigaygu waa dhoobada laydhka ah, waxaan u yeeray magaalada, laakiin taasi si wacan uma fiicnayn sidaas ayaan u maleynayaa Wicitaankii labaad waa Waaxda Caafimaadka ee Degmada), waxaan dib u dhigay oo waan joojinayaa shaqada. Ma waxaan jecelahay wtf? runtii?
waali sano 3 4 bilood ka hor #218
PAYSON wuxuu qoray: Hi KC, marnaba ma lahan X-45, waxaan u maleynayaa in farriimaha ay sameeyeen iskutallaab. Dhamaan waligay lahaan jiray waa nidaamka xakamaynta Saiten ee X-55 HOTAS. Waa inay ahaadaan "mid isqabsi leh". Haddii aan rabo kaliya saan iyo badhado waxaan ku laaban lahaa Logitech Supreme, taas oo ah dhammaan waxaad u baahan tahay haddii aad tijaabiso diyaarad. Haddii aad (sida aan ahay) wax dagaal ah oo ka dhan ah qaar ka mid ah AI, ka dibna X-55 (ama 65) "nidaamka xakamaynta" waa tigidhka kulul ee HOTAS.
Fiiri maaha wax badan oo hawadu u socoto dagaalka hawada, laakiin waxaan ku faraxsanahay dhammaan hawlaha 55 sida aniga inta badan u duulaya jumbos ... Waxaan aad u jeclaa isticmaalka lakab kasta
Maadaama aan sameeyo wax badan oo ILS ah oo la xidhiidha maalmahaas (waxaan u isticmaali jiray ILS hadda waxaan jeclahay lol), waxaan leenahay in laysugu yimaado labada baabuur si loo beddelo GPS-ga ilaa NAV1 iyo NAV illaa u dhow. Waxaan ka fekerayaa waxa kaliya ee aan u isticmaalo kumbuyuutarka markii aan lahaa 45 waxay ahayd inuu la hadlo ATC, isa saaro / off APU, iyo laga yaabee 1 ama 2 waxyaabo yaryar lol
waali sano 3 4 bilood ka hor #221
OK Waa inaan ku jiraa kulan qaldan. Raaligelin badan .gtg
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.231